प्रचण्डको दाबी, 'ओली, खनाल र नेपाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ'
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका युवा संगठनहरुको एकीकरणको काम दुई दिन भित्र टुंगो लगाइने घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणको कामलाई पनि २ दिन भित्र सम्पन्न गर्न आफूले जोड दिएको स्पष्ट पारे ।उनले मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसर पारेर जेठ ३ गते पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणको काम सम्पन्न हुने गरी भोली बिहान पार्टीको सचिबालयको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।युवा संघ, नेपालको स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मदन भण्डारी स्मृति दिवसको दिन युवा संगठनहकरुको एकीकरण हुने घोषणा गरे । अन्य संगठनहरुको एकीकरणको काममा केही ढिलाई हुन सक्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेताहरु केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले पहल गरेको स्मरण गराए । उनले आफूले केही गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै पार्टीका नेताहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । तर उनले के गर्न खोजेको हो भन्ने चाँही स्पष्ट पारेनन् । अध्यक्ष दाहालले जनता र राष्ट्रको चाहना र भावनाको जगमा दुई पार्टीबीच एकता भएको स्पष्ट पारे ।कार्यक्रममै बोल्दै वरिष्ठ नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अंहकार छोडी जनताको मन जित्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अंहकारी दृष्टिकोण, गलत चिन्तन र सर्वश्रेष्ठताको भ्रमले पतन तर्फ डोर्याउने भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाई लोकप्रिय बनाउने तर्फ गम्भीर बन्न सुझाव दिए । उनले बहुमतको अंहकारमा नपर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।उनले भने, “हाम्रो काम र व्यवहारले नै जनताको मन जित्न सक्दछ । जनताका पीर, मर्कामा सहयोगी भयौ भने, जनताको दुख कष्टमा साथ दियौ भने अनि जनताको सुखमा पनि रमायौ भने अनि जनताले हामीलाई मन पराउनेछन् । नभए त्यतिकै जनताले मन पराउँछन् भनेर त्यसको ग्यारेण्टी गरेर बस्न सक्दैनौ । ख्याल गर्नुहोस् । ख्याल गर्नुहोस् । यसअर्थमा पनि जनताका समस्याहरु के हुन् ? जनताका चाहानाहरु के हुन् ? जनता के भनिरहेका छन् ? त्यो सुन्नुहोस् । म जोड दिन चाहन्छु । हाम्रो बानी के भएको छ भने भन्ने बोल्ने । सुन्ने कम ।”त्यस्तै नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको विचार र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका नेता पोखरेलले एकताबद्ध भएको पार्टी विचारमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।विश्वमा भएका घटना नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले विचारको स्पष्टतालाई नेतृत्वले विशेष महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विचारमा स्पष्ट हुन नसके कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध भएर ठुलो बनेपनि निर्णायक जीत हासिल गर्न नसक्ने तर्क गरे ।
प्रचण्डको दाबी, ‘ओली, खनाल र नेपाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ’
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:४७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका युवा संगठनहरुको एकीकरणको काम दुई दिन भित्र टुंगो लगाइने घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणको कामलाई पनि २ दिन भित्र सम्पन्न गर्न आफूले जोड दिएको स्पष्ट पारे ।
उनले मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसर पारेर जेठ ३ गते पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणको काम सम्पन्न हुने गरी भोली बिहान पार्टीको सचिबालयको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
युवा संघ, नेपालको स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मदन भण्डारी स्मृति दिवसको दिन युवा संगठनहकरुको एकीकरण हुने घोषणा गरे । अन्य संगठनहरुको एकीकरणको काममा केही ढिलाई हुन सक्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।
अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेताहरु केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले पहल गरेको स्मरण गराए । उनले आफूले केही गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै पार्टीका नेताहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । तर उनले के गर्न खोजेको हो भन्ने चाँही स्पष्ट पारेनन् । अध्यक्ष दाहालले जनता र राष्ट्रको चाहना र भावनाको जगमा दुई पार्टीबीच एकता भएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममै बोल्दै वरिष्ठ नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अंहकार छोडी जनताको मन जित्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अंहकारी दृष्टिकोण, गलत चिन्तन र सर्वश्रेष्ठताको भ्रमले पतन तर्फ डोर्याउने भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाई लोकप्रिय बनाउने तर्फ गम्भीर बन्न सुझाव दिए । उनले बहुमतको अंहकारमा नपर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
उनले भने, “हाम्रो काम र व्यवहारले नै जनताको मन जित्न सक्दछ । जनताका पीर, मर्कामा सहयोगी भयौ भने, जनताको दुख कष्टमा साथ दियौ भने अनि जनताको सुखमा पनि रमायौ भने अनि जनताले हामीलाई मन पराउनेछन् । नभए त्यतिकै जनताले मन पराउँछन् भनेर त्यसको ग्यारेण्टी गरेर बस्न सक्दैनौ । ख्याल गर्नुहोस् । ख्याल गर्नुहोस् । यसअर्थमा पनि जनताका समस्याहरु के हुन् ? जनताका चाहानाहरु के हुन् ? जनता के भनिरहेका छन् ? त्यो सुन्नुहोस् । म जोड दिन चाहन्छु । हाम्रो बानी के भएको छ भने भन्ने बोल्ने । सुन्ने कम ।”
त्यस्तै नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको विचार र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका नेता पोखरेलले एकताबद्ध भएको पार्टी विचारमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
विश्वमा भएका घटना नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले विचारको स्पष्टतालाई नेतृत्वले विशेष महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विचारमा स्पष्ट हुन नसके कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध भएर ठुलो बनेपनि निर्णायक जीत हासिल गर्न नसक्ने तर्क गरे ।
Prevजेठ २ गते एबीसी ‘इजुकेसन इन्फरमेसन सेमिनार-२०१९’ हुने
विशेष अदालतमा ७८ लाख धरौटी बुझाएर राजनारायण पाठक रिहाNext